Ultimate Car Driving Simulator 3.0.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.0.1 လြန္ခဲ့ေသာ 10 လက
ဂိမ္းမ်ား ၿပိဳင္ပြဲ Ultimate Car Driving Simulator
Ultimate Car Driving Simulator ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
2018 ၏ Simulator ကိုဂိမ်းကားမောင်းအကောင်းဆုံးကားတစ်စီးအရှိဆုံးလက်တွေ့မောင်းနှင်ရူပဗေဒ, န့်အသတ်စိတ်ကြိုက်, ကြီးမားပွင့်လင်းကမ္ဘာကြီး, စွဲလမ်းဂိမ်းနှင့်အဆုံးမဲ့ပျော်စရာနှင့်တကွကြွလာ!
★ အစစ်အမှန် drive ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ
အဆုံးစွန်မော်တော်ကားယာဉ်မောင်း Simulator င်း၏အဆင့်မြင့်ကားတစ်စီးရူပဗေဒအင်ဂျင်မောင်းနှင့်အတူမိုဘိုင်းပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးကားတစ်စီးမောင်းနှင် Simulator ကိုဖန်တီးရန်ရူပဗေဒကားမောင်းသည့်သရုပ်မှန်နှင့်ပျော်စရာပေါင်းစပ်။ Simulator ကိုကားမောင်းအကောင်းဆုံးကားတစ်စီးကိုအကောင်းဆုံးမောင်းနှင်ရူပဗေဒနှင့်တကွကြွလာ! ပယ်လမ်း SUVs ကားပြိုင်ကား မှစ. မော်တော်ယာဉ်အမျိုးမျိုးတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရူပဗေဒရှိသည်!
★ Unlimited custom
သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကား Create လူတိုင်းရန်သင့်စတိုင်ကိုချွတ်ပြပါ! ကားတစ်စီးအစိတ်အပိုင်းများမှမရေမတွက်နိုင်သောဗီနိုင်းကနေ, သင်သည်ဤဂိမ်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်ကားတစ်စီးဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းသင့်ရဲ့သာကန့်သတ်ပါ! အစွန်းရောက်စိတ်ကြိုက်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်!
အဆိုပါဧရာမပွင့်လင်းကမ္ဘာ့မြေပုံသင့်ရဲ့အစွန်းရောက်တဲ့ကားမောင်းနှင်မှုစွမ်းရည်များစမ်းသပ်နှင့်အကောင်းဆုံးဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပေးမယ့်ဖန်တီးမှုလမ်းအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အမြို့မြို့တို့မှသဲကန္တာရရန်, Ultimate ကားယာဉ်မောင်း Simulator အလွန်အသေးစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူအကြီးဆုံးပွင့်လင်းကမ္ဘာ့မြေပုံနှင့်အတူကြွလာ။ သင့်ရဲ့ SUV ကားနှင့်အတူအဆုံးမဲ့ offroad ဧရိယာပေါ်မောင်းနှင့်မိုဘိုင်းအပေါ်အတွေ့အကြုံကိုကားမောင်းအရှိဆုံးလက်တွေ့ကျကျ offroad ခံစားရသည်။
★ THE BEST အသံအထူးပြုလုပ်
လူအားလုံးတို့သည်အသံကစားသမားဖို့အပြင်းထန်ဆုံးခံစားချက်များကိုအစစ်အမှန်ကားများအနေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောနေကြသည်။ အင်အားအကောင်းဆုံးပြိုင်ကားကားကိုသံကိုကနေမီးလော offroad အင်ဂျင်မှသည်မော်တော်ကားကိုမှန်ကန်ပြိုင်ကားကားများအနေဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသောမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အထူးသံကိုရှိပါတယ်!
အဆင့်မြင့်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်၏အကူအညီနှင့်အတူ, Ultimate Simulator ယခုအရှိဆုံးလက်တွေ့ကျကျဂရပ်ဖစ်နှင့်မိုဘိုင်းအပေါ်အစဉ်အဆက်အနက်ရှိုင်းဆုံး 3D ပေးပါသည်။ သင်ကအဖြစ်မှန်ကနေသင့်ရဲ့အစွန်းရောက်ကားများကွဲပြားခြားနားသွားခဲအချိန်ရှိသည်လိမ့်မည်!
★ မရေမတွက်နိုင်သော CARS
လမ်းမော်တော်ယာဉ်များ, SUVs, tuner ကားများ, ကြွက်သားကားများ, 4WD ထရပ်ကားကိုချွတ်, ကားများပြိုင်ကား ... သင်အကြိုက်ဆုံးမော်တော်ယာဉ် Pick နှင့်သင်ဧရာပွင့်လင်းကမ္ဘာ့မြေပုံထဲမှာကျင့်ချင်သမျှပြုပါ!
အဆုံးစွန်မော်တော်ကားယာဉ်မောင်း Simulator သင့်ရဲ့အကြံပြုချက်များနှင့်အတူပုံမှန် updated လိမ့်မည်။ သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်နဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုစွန့်ခွာဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။
မှာ Facebook တွင်ရပ်ရွာကိုလိုက်နာပါ
ယခု 2018 ရဲ့အကောင်းဆုံးမောင်းနှင်မှုဂိမ်း Download!
Ultimate Car Driving Simulator အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Ultimate Car Driving Simulator အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Ultimate Car Driving Simulator အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
greggeilo စတိုး 17.09k 2.88M
Ultimate Car Driving Simulator ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Ultimate Car Driving Simulator အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Atahan Sir
လက်မှတ် SHA1: 7E:78:96:D9:8B:10:88:90:FB:5C:D9:D1:62:00:DE:EC:9F:06:D3:52
Ultimate Car Driving Simulator APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ